* 32-bit dual-chip sy DSP decoding
* Ny barcode 2D dia manao fanangonana, manohana ny fandoavam-bola 2D barcode miaraka amin'i Alipay sy Wechat.
* Ny halalin'ny saha super,
* High precision, ny decoding marina 5mil
* Haavo kokoa ny hakitroky ny fampidirana
* Fenoy ny jiro, mora ny mifamadika amin'ny disable
20 andalana optika grating omnidiectional scanning,180° Adjustable bracket.Easily hisambotra barcodes amin'ny etikety, taratasy, ary finday na solosaina efijery.Ny megapixel sary miantoka ny tsara kokoa ny decoding sarotra-to-vakiana barcodes. Applicable amin'ny universal.
Supermarket Desktop 2D Omni-directional Barcode Scanner MJ9520
Ny Omnidirectional Barcode Scanner dia manohana ny famandrihana efijery, alaivo mora foana ny kaody QR 2D 1D mahazatra, kaody PDF417 napetraka amin'ny fahazoan-dàlana mpamily na kara-panondro.Na dia manjavozavo aza, barcode tsy feno.
Hot Products China Supermarket tsy misy tanana USB 2D Barcode Scanner MJ9520
-Fandeferana amin'ny hafainganam-pandeha avo: hatramin'ny 4,0 metatra / seg
-Fifanarahana maro: Manohana rafitra Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux
- Manohana fiteny 20 mahery: anglisy, alemà, frantsay, italiana, rosiana.
- Fampiasana maro: Mivadika mora amin'ny maodely fandefasana haingana mankany amin'ny fomba fitahirizana.Nampiasaina tamin'ny Scanner Wired.
● Mety amin'ny toeram-pivarotana lehibe, fivarotam-panafody, fivarotana antsinjarany
● Vakio ny barcode 1D/2D mahazatra rehetra avy amin'ny etikety taratasy sy efijery elektronika
● 100% teknolojia manokana mba hihaona customization fepetra
● Ny sary megapixel dia miantoka ny fampandehanana tsara kokoa amin'ny famoahana kaody barcode sarotra vakiana
● Mifanaraka amin'ny Linux, Android, Windows XP7/8/10/MAC OS
* Ny maodely ecran fikasihana vaovao dia mahatonga ny fifindran'ny fomba malefaka kokoa.
* Ny haavon'ny feo dia azo amboarina amin'ny sitrapony.
Mety amin'ny indostrian'ny varotra vaovao isan-karazany, mifamadika amin'ny taratasy
* barcode sy barcode finday.
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Barcode Scanner mora, China Barcode Scanner, Scanner Barcode tanana, QR Code Reader Barcode Scanner, Barcode Scanner, QR Code Barcode Scanner, Ny vokatra rehetra